Waxaan maanta qormadeena ku soo qaadaneynaa waa maxay guur, Maxaase lagu macneeyaa erayga guur. Guurka macnahiisu waxaa garanayo qof walbaa. Laakin kama hadlayo in la is guursado misana qoys la sameyso balse waxaan rabnaa inaan sharaxno macnaha erayga guur. Guurku waa nasteexo, waa wax loo baahan yahay. Baro 3 waxyaabood uu guurku leeyahay Guur Shukaansi Xaflad Aroos Haddii aan nahay dhalinyaro waxaan dooneynaa guur, inaan guursano, awlaad aan dhalno, nolol qurux badan ku noo